Akụkọ - Otu esi eji ákwà mgbochi ọnụ ụzọ PVC mee ihe nke ọma ma mee ka ndụ ya dị ogologo
1, adịghị akpọtụrụ na PVC siri ike siri ike ákwà mgbochi, ka ọ ghara ịcha mmetụta nke ịma mma.
2, iji ákwà mgbochi PVC dị nro dị mkpa ka a na-ehicha ya iji hụ na ọ dị ọcha, na ihicha nwere ike iji mmiri dị ọcha na akwa efere na-ehichapụ, machibido ịbanye n'ime mmiri ogologo oge, anaghị eji ihe na-ehicha acid-base.
3, Ngwunye ákwà mgbochi dị nro na mgbakọ na-adịghị emekarị, ka ịzere ntụrụndụ, na-eduga na ntinye adịghị ike.Ejila ákwà mgbochi dị nro nwere ike iwepụ, jiri ebe akọrọ chekwaa.
4, PVC ákwà mgbochi dị nro na ojiji nke okpomọkụ enweghị ike ịdị elu, ma na-ejikọta ya na ndị na-emepụta ihe, ọkụ ma ọ bụ polymer mmanụ kọntaktị, ka ọ ghara imebi arụmọrụ nke ákwà mgbochi dị nro, na-ebelata ndụ ọrụ.
Ihe dị n'elu bụ mmepụta nke ákwà mgbochi dị nro maka onye ọ bụla iji webata iji ihe mkpuchi PVC mee ihe ndị chọrọ nlebara anya, enwere m olileanya na m ga-enyere gị aka, ndị na-emepụta ihe na-eji ihe mkpuchi dị nro dị elu, àgwà nke ákwà mgbochi a na-emepụta bụ nke a pụrụ ịdabere na ya, ọnụahịa nke ákwà mgbochi ahụ. bụ ihe ezi uche dị na ya, site na ọtụtụ ndị ahịa na-anabata na nkwado nkọwa ngwaahịa: nkịtị transperent ogige soft ákwà mgbochi nwere ezi nghọta, ọ nwere ike igbochi ọnwụ nke ikuku-conditioning na kpo oku;ọ nwere ike igbochi mwakpo nke uzuzu na ụzarị ultraviolet nke ọma, ma nwee mmetụta mkpuchi ụda dị mma, nke mere na ebe ọrụ gị dị ọcha ma dị mma.
Mmetụta na-echekwa ike: PVC ákwà mgbochi anaghị eri ọkụ eletrik, ọ dịghị mkpọtụ, ọ dịghị ihe omume na-eme ka ọ dị mma nke na-ekpo ọkụ, belata oge nke refrjiraeto, chekwaa ọkụ eletrik ruo 50%.Mmetụta mkpuchi ụda: Pvc ákwà mgbochi nwere ike ibelata decibel mkpọtụ, gbochie mgbasa mkpọtụ, belata mmetọ mkpọtụ, mee ihuenyo nke igwe, melite nkasi obi ohere ọrụ na mmepụta mmepụta.
Mmetụta na-ekpuchi ikuku: Nrụnye nrụnye na-ekpuchi, ezigbo ikuku na-ekpuchi ya, na ịdị arọ nke ákwà mgbochi ahụ n'onwe ya, na ifufe ihu igwe na-adịghị mma, agaghị agbada ma na-emetụta ọrụ nkịtị.